Iindaba - Zithini iimpahla zokhuselo lwelanga? Yintoni unyango lwe-UPF?
Yintoni impahla yokhuselo yelanga? Yintoni unyango lwe-UPF?
Ukuba ungumhambi oselunxwemeni osebenzayo, isurfer okanye usana lwamanzi, kunokwenzeka ukuba ukhalaze ngokuba kufuneka uthambise i-sunscreen ngalo lonke ixesha ujika. Emva kwayo yonke loo nto, kuyacetyiswa ukuba uphinde ufake i-sunscreen rhoqo emva kweeyure ezimbini okanye-ngakumbi ukuba uyaphuma, uqubha okanye ubile rhoqo. Kwaye nangona oku kungazukusombulula zonke iingxaki zakho- kuba kuyacetyiswa ukuba kusetyenziselwe ulungelelwaniso ne-sunscreen- singakwazisa ngempahla yokhuselo lwelanga?
Huh? Yahluke ngantoni kunempahla yakudala nje, ubuza?
Kulungile kwabasaqalayo, ugqirha wesikhumba, uAlok Vij, MD, uthi xa ethetha ngamalaphu asebenzise igama elithi "UPF," elimele ukhuselo lwe-ultraviolet. Kwaye nge-sunscreen, sebenzisa igama elithi "SPF," okanye into eqhelekileyo yokukhusela ilanga. "Inkoliso yeehempe zikunika ulingana ne-UPF yesi-5 xa uyinxibile," ucacisa.
“Amalaphu amaninzi esiwanxibayo lulu oluvulekileyo olwenza ukuba ukukhanya kubonakale ngaphakathi kwaye kufikelele kulusu lwethu. Ngeempahla ezikhuselwe yi-UPF, lo msonto weave wahlukile kwaye amaxesha ngamaxesha wenziwa ngelaphu elikhethekileyo ukunceda ukwenza isithintelo kwimitha yelanga. ”
Ukukhanya kwe-UV kunokungena kwimingxunya emincinci kwimiluko yeempahla eziqhelekileyo okanye kunokuhamba ngokuthe ngqo ngehempe ekhanyayo. Ngeempahla ze-UPF, ibhloko inkulu kakhulu, ikunika ukhuseleko ngakumbi elangeni. Ewe, impahla ene-UPF ikhusela kuphela iindawo zomzimba wakho ezigutyungelwe lilaphu elinyangiweyo.
Uninzi lwezinto zokukhusela ilanga zikhangeleka kwaye zivakalelwa njengokunxiba okusebenzayo okanye iimbaleki kwaye ziza kwiindidi zehempe, iileggings kunye neminqwazi. Kwaye ngenxa yokubala okuphezulu kwemisonto, ihlala iziva intofontofo ngakumbi xa ithelekiswa neT-shirt yakho esemgangathweni.